Tranganà Bilaogera Maleziana hoe Nanàla Baràka – Miteraka Ahiahy · Global Voices teny Malagasy
Tranganà Bilaogera Maleziana hoe Nanàla Baràka – Miteraka Ahiahy
Voadika ny 29 Jona 2011 7:28 GMT
Fampidirana avy amin'ny fansàna ny bilaogin'i Dr Agnes Callamard avy amin'ny ARTICLE 19.
Manoloana ny fitsarana an'ilay Maleziana mpiaro ny zon'olombelona sady bilaogera, Charles Hector noho ny resaka fanalàm-baràka, amin'ny 28-29 Jona 2011, niantso ny Fitsarana Maleziana ny ARTICLE 19 mba handinika ilay tranga mifanaraka amin'ny fepetra iraisam-pirenenan'ny fahalalahana maneho hevitra anaty aterineto.
Raha ny lanja mavesatry zo halalaka maneho hevitra, sy ny fankatoavan'ny andalana faha 10 ao amin'ny Lalampanorenana Maleziana azy io, ARTICLE 19 dia mangataka ny Fitsarana mba hanome antoka fa hoe ny lalàna Maleziana mifehy ny fanalàm-baràka dia hodinihana, araka izay azo atao, ao anatin'ny fanajàna tanteraka ny zon'i Hector halalaka hiteny.
Charles Hector dia enjehana noho ny fanalàm-baràka eny amin'ny Fitsarana Ambony ao Malezia ao Shah Alam, ka ny zana-tsampana Malezianin'ny Asahi Kosei Japan Co. Ltd , orinasa Japoney mpikirakira elektronika no mpanenjika. Ny fanalàm-baràka dia miodina manodidina ny lahatsoratra navoakan'i Hector tao amin'ny bilaoginy izay maneho ny ahiahiny mikasika ny fomba fitondran'ilay orinasa ireo mpiasa 31 mpila ravinahitra avy any Myanmar. Ny fomba fijeriny dia miainga amin'ny fikarohana nataony. Ny orinasa, izay efa nahazo didy manery ny bialogin'i Hector, dia mangataka onitra RM10 million (eo amin'ny US$ 3.2 tapitrisa eo).
Na dia tsy nanao sonia, na ny Fifanarahana Iraisam-pirenena momba ny Lalàna Sivily na ny Zo ara-Politika aza i Malezia, dia tsy mamatotra loatra ny firenena ny fifanekena iraisampirenena mikasika ny fanalam-baràka, ARTICLE 19 dia mihevitra fa ny fanomezan-toky avy amin'ny lalampanorenana hànana ny zo hiteny malalaka ao Malezia dia ahafahana manana sehatra malalaka amin'ny fandalinana ny ambaran'ny lalàna.
Ny ARTICLE 19 manokana dia miantso ny Fitsarana hiaiky fa ny vesatry ny fanaporofoana mikasika ny tsy maha-marina ny fanambaràna am-bilaogy dia tokony ho anjaran'ny mpitory. Ankoatra izay, araka ny fenitra iraisampirenana, na dia voaporofo aza ny tsy fahamarinan'ny fanambaràna momba ny olana iray mahakasika ny tombontsoan'ny be sy ny maro, dia tokony hahazo ny antsoina hoe ‘didy mifanentana’ ny olona enjehana amin'ny lalàna momba ny fanalàm-baràka, na koa fantatra amin'ny hoe ‘ natao tamin'ny fo madio’ na ‘famoahana didy mifanentana’. Amin'izany, ny ARTICLE 19 dia miteny fa Hector dia tsy tokony horaisina hoe tomponandraikitra raha toa ka voaporofo fa nataony sy ninoany tamin'ny fo madio ny fahamarinan'ny lahatsoratra nosoratany.
ARTICLE 19 koa mino fa raha araka ny maha-izy azy ny bilaoginy, tokony hisitraka ny didy mifanentana i Hector, izay lazain'ny lalàna momba ny fanalàm-baràka any Malezia. Farany, tokony hamela ny ao amin'ny fiarovana ary hitady ny filazàna ho fanalàna baràka ny fitsarana, ka ny haben'ny onitra dia tsy maintsy faritana arakarak'izay.
ARTICLE 19 dia mampitandrina fa ny masom-bola angatahan'ilay orinasa dia mety hiteraka vokatra masiatsiaka handemy ny hoavin'ny fampiharana ny zo hiteny malalaka, tsy ho an'i Hector ihany fa koa ho an'ny hafa mpiaro ny zon'olombelona sy ny mpampahalala vaovao ao Malezia.